Mụbawanye Ọgụgụ Gị | Martech Zone
Andgbasa Ọgụgụ Gị
Monday, August 11, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ma ị bụrụ onye na-ede blọgụ ma ọ bụ nwee blọọgụ nke gị, otu n'ime ihe uto nke blọọgụ gị ga-adabere n'ike gị iru ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ na-amaghị na blọọgụ gị dị. M na-eme nke a site na ọtụtụ usoro of iji dị mkpa na ha bụ:
Na-ekwu banyere blọọgụ ndị ọzọ, ọkachasị mgbe ha nọ n'otu ụlọ ọrụ. Achọpụtara m ha Alerts Google, Nchọta na Google, na Teknụzụ.
Ana m ebipụta ndepụta RSS m na ọtụtụ saịtị dịka m nwere ike, gụnyere saịtị ndị ọzọ na -elekọta mmadụ netwọk.
M debanyere aha na saịtị weebụ ọ bụla nke 2.0 nke m nwere ike na m ejide n'aka na adreesị blog na adreesị ndepụta RSS m bi n'ụzọ ụfọdụ na profaịlụ m.
M ahu nagide akpaghị aka ngosi atụmatụ maka Twitter (ọ bụ ezie na ọ na-akụda mmụọ na-akụda mmụọ ma ọ bụrụ na m gapụtaghachi akwụkwọ ozi edepụtara na mbụ).
Ana m ekwu okwu na ihe omume mpaghara mgbe ọ bụla o kwere omume.
Ana m enye adreesị blog m kaadị azụmahịa nye onye obula m zutere!
Ana m akwado blogosphere site na wepụta mgbakwunye plugins na ngwaọrụ ka folks jiri.
M na-agbalị itinye ụfọdụ njikọ na saịtị ndị ọzọ, dị ka Knol na ndị ọzọ Wikis.
N'ikpeazụ, ana m ewepụta onwe m dee akwụkwọ ozi ndị ọbịa mgbe a na-enye m ma anaghị m atụfu ohere ide maka nnukwu weebụsaịtị mgbe a jụrụ ya, n'agbanyeghị ụgwọ!
Ihe dị ka otu ọnwa gara aga, kpọtụrụ m Ogige Talent dee akwukwo kwa ọnwa na Social Media na ahia maka saiti ha. Afọ iri gara aga, a bịara mara Talent Zoo dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọkachasị maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. N'okwu ha:
Ka dot-com ghọrọ ntụpọ-bọmbụ, TalentZoo.com toro. Ọ bụ ugbu a nchekwa data dị n'ịntanetị ebe ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ nkwukọrịta nwere ike ịlele ihe karịrị 100,000 maliteghachi site na ndị ọrụ ọhụrụ na ndị ọkachamara. Ọ bụ ebe ndị na-achọ ọrụ na-achọta ohere ọrụ. Na TalentZoo.com na-echekwa ihe ọhụrụ ahụ, dị ka ịgbakwunye ọdịnaya ndị ọzọ a ga-agụ na akụkọ ụlọ ọrụ, ọnọdụ, ndụmọdụ ọrụ yana bọọdụ ozi na pọdkastị iji dọtakwuo ndị na-achọ ọrụ.
A ga-ebipụta edemede mbụ m na Wednesde a! Ana m atụ anya nnabata nke isiokwu (ndumodu: ụlọ ọrụ / teknụzụ ọhụụ na-agbawa ugbu a na-enyere ndị na-ere ahịa aka itinye ego ma rụọ ọrụ). Ana m atụ anya iru ndị na-ege ntị ọhụụ site na Talent Zoo! O doro anya na ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ ga-agbago na blọọgụ m.
Tags: mobile ọrụmultidomainmmekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ na mpagharasolomoala nke mmekorita n'ịntanetị
The New Business “Kaadị” Ebe a!
Anyị vs.!! You na-ege ntị?
Aug 12, 2008 na 7: 58 AM
Iji ndepụta gị dị ka ndepụta, ejiri m kpuchie #s 1-4. Oge na-esi na-arụ ọrụ na #s 5-8! Daalụ maka ndụmọdụ, Doug.
Aug 12, 2008 na 3:49 PM
Nnukwu nnyocha. Daalụ maka ndụmọdụ. # 3 bụ oge na-eri oge, amalitere ịmalite ịrụ ọrụ na # 7. Ga-abịa na a ọhụrụ echiche ezie. Daalụ ọzọ.
Aug 15, 2008 na 11: 02 AM
Ana m ebipụta n'ọtụtụ akwụkwọ na-adịghị n'ịntanetị, gụnyere akwụkwọ akụkọ 8 kwa izu na steeti. Nke ahụ anaghị emetụta ọnụọgụgụ blọgụ m, mana ọ na-abawanye ịgụ akwụkwọ m niile (nke karịrị 30,000 kwa izu).